International hotera boka Maritim anovhura maviri matsva zvivakwa muEurope
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » International hotera boka Maritim anovhura maviri matsva zvivakwa muEurope
Albania Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Yepasi rose hotera boka Maritim Mahotera akavhura zvivakwa zvitsva muEurope - Maritim Hotel Paradise Blue Albena muBulgaria ine tarisiro yakasimba pakusimudzira neayo yega biofuel nzvimbo uye Maritim Hotel Plaza Tirana ndiyo yekutanga hotera ye5-nyeredzi yeAlbania.
Tarisa pane kugadzikana muBulgaria
Iyo ichangovakwa-nyeredzi shanu Maritim Hotel Paradise Blue Albena iri pamusuwo weimwe yeBulgaria yakanakisa zvisikwa zvisikwa, iyo Baltata. Ihotera yacho ine makamuri 238, anosanganisira masutu makumi maviri nematanhatu, masitudiyo masere uye masutu mana eVIP ane nhurikidzwa / panjere yega. Kune dzimba nhatu dzemusangano, dzinokwana vanosvika mazana mashanu, zana nemakumi mana kana makumi masere evamiriri.
Vashanyi vanogona kunakidzwa nerudzi rwekudya zvemuno mumaresitorendi mana ehotera, kusanganisira iyo Blue Essential Buffet Restaurant, iyo inoshandira chaiyo yezvigadzirwa zvemudunhu, yakakura uye inounzwa mukubatana pamwe nevemahotera emuno varimi venyama.
Sustainability iri pamusoro pehurongwa - hotera inoshandisa yayo yega biofuel nzvimbo kuburitsa yayo isingaperi simba sosi uye inotora chikamu mu'Zero Waste 'chirongwa chekushanya icho chinotarisira kuburitsa diki diki sezvinobvira.
Ihotera iyi zvakare ine yega yega gungwa, dziva rekushambira rine maonero egungwa, iyo Sense Spa & Wellness nzvimbo ine sauna, dzimba remukati uye jimu, pamwe nehurongwa hwakasiyana hwemitambo yemitambo uye varaidzo.
Yekutanga 5-nyeredzi hotera muAlbania
The itsva Maritim Hotel Plaza Tirana ndiyo yekutanga hotera ye5-nyeredzi yeAlbania. Inowanikwa pakati pamwoyo weguta reAlbania Tirana, iri zvakare iri padyo padyo neTirana International Airport.
Ihotera ine makamuri mana emusangano uye emusangano anogara mapoka ehukuru hwese, makamuri zana nemakumi masere nemasuti anopfuura makumi maviri nematatu pasi, maresitorendi akati wandei nenzvimbo yemazuva ano yekupora uye yekusimbisa muviri.
Iine nzvimbo makumi matatu nematatu kuGerman pamwe nemahotera muMauritius, Egypt, Turkey, Spain, Malta, Bulgaria, Albania neChina, The Maritim Hotelgesellschaft ndiro rakakura-rinotungamirwa neboka revatambi vemuGerman. Chikamu chayo chinosanganisira epakati peguta mahotera, mahotera ari nyore emahombekombe, mahombekombe emahombekombe emahombekombe, mahombekombe emhuri emahombekombe, kosi-inosangana nemahotera egorofu uye hotera dzeparkland spa.